China Zinc pyrithione mveliso mveliso kunye nabenzi | Guanlang
I-Zinc Pyrithione Detergent I-Raw Materials yoKhathalelo lweeNwele zeKhemikhali I-Zinc Pyrithione ZPT Powder yomvelisi womthengisi e-china
Singomthengisi ophambili weZinc Pyrithione eChina, sivelisa iZinc Pyrithione ngetekhnoloji entsha kunye nexabiso lokhuphiswano
Igama lemveliso IPyrithione Zinc
I-EINECS HAYI. 236-671-3
Ifomula yeMolekyuli C10H8N2O2S2Z
Ubunzima beMolekyuli 317.7217
Indawo yokubilisa 253.8 ° C kwi-760 mmHg
Elinye igama: ZPT
Ukusukela ngo-2007, Singomnye wabathengisi beZinc Pyrithione ekhokela e-china
Yintoni i Zinc pyrithione ?
I-ZPT (iZinc pyrithione) yaziwa kakhulu ngokusetyenziswa kwayo kunyango lwe-dandruff kunye ne-seborrhoeic dermatitis. Inezinto zokulwa neentsholongwane kwaye iyasebenza ngokuchasene namagciwane amaninzi avela kwiklasi ye-streptococcus kunye ne-staphylococcus. Olunye usetyenziso lwezonyango lubandakanya unyango lwe-psoriasis, i-eczema, umbandamu, ukungunda, iinyawo zeembaleki, ulusu olomileyo, i-atopic dermatitis, i-tinea kunye ne-vitiligo.
I-Zinc pyrithione ivunyiwe ukuze isetyenziswe e-United States njengonyango lwenyango. Sisithako esisebenzayo kwiishampu ezininzi zokulwa inkwethu njengeNtloko kunye namaGxa. Nangona kunjalo, kwiimo zayo zeshishini kunye namandla, kunokuba yingozi ngokudibana okanye ukungenisa
Igama: Zinc Pyrithione (ZPT)
Inombolo ye-CAS: 13463-41-7
Umxholo: ≥ 98%
Indawo yokunyibilika: ≥ 240 ℃
Ubungakanani be Particle D50: ≤ 5 μ M D90: ≤10μm
Iphakheji: 25kg yekhadibhodi yegubu
I-Zinc Pyrithione Powder ine-antibacterial kunye ne-anti-fungal iipropathi kwaye iyasebenza ngokuchasene namagciwane amaninzi. Ingasetyenziselwa ukugcinwa kwifomula, kodwa ikwabandakanywa kufakelo lokhathalelo lweenwele njengearhente yokufaka iinwele ezinokuphucula ukuthungwa kweenwele kunye nokuthintela nokunyanga inkwethu.
Zothutho: Kuphephe ujonge ezantsi, ilanga, emanzi kunye ngozi, avoiddamage package.
Ukugcinwa: Kufuneka kugcinwe kwindawo epholileyo, eyomileyo kunye nomoya, ixesha eligciniweyo akufuneki lidlule kwiminyaka emi-2.
Egqithileyo Iglasi yezithambiso i-GSH l-Glutathione / lglutathione Powder yehliselwe isikhumba esimhlophe somthengisi wempuphu yeglathathione e-china
Okulandelayo: Umthengisi wecrystal mannitol umthengisi u-Hebei Guanlang Biotechnology Co., Ltd.
thenga iZinc pyrithione
thengisa iZinc pyrithione
Umenzi we-Zinc pyrithione
Umthengisi we-Zinc pyrithione
Ibakala lezithambiso i-GSH l-Glutathione / lglutathione ...